Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Adama Traore Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha "Usain Bolt“. Anyị Adama Traore Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na nkwalite nke Adama Traore. Ebe E Si Nweta Foto: Onwere Onwe, SportsMole, Joe na FC-Barcelona
Ee, onye ọ bụla maara banyere akwara ya na-ewu ma na-agba ọsọ nke na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị egwuregwu ịgba ọsọ ọsọ na FIFA na ụwa. Ma, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlere Adama TraoreAkụkọ ndụ mmadụ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Na-amalite, aha ya niile bụ Adama Traoré Diarra. Adama Traore dị ka a na-akpọkarị ya mụrụ na 25th ụbọchị nke January 1996 na nne ya, Fatoumata na nna, Baba Traoré n'obodo L'Hospitalet de Llobregat, southwest nke Barcelona. Ọ bụ nwa nwoke nke abụọ na ụmụ atọ n’ime ụmụ atọ amụrụ nne na nna ya mara mma nke e sere n’elu.
Zute Adama Traore Nne na nna- nne ya (Fatoumata) na Nna (Baba). Ekele diri IG
Ndị nne na nna Adama Traore bụ ndị Spain kwabatara si na ezinụlọ ha site na Mali, obodo enweghị mkpọdo nke dị na West Africa. Naanị n'ọnụ… Obodo ọdịda anyanwụ Afrịka nke Mali mejupụtara ọkara nke Ọzara Sahara, ọ bụkwa mba nke asatọ kachasị na Africa.
Maapụ na-egosi obodo nke Mali- Adama Traore Family Origin. Ebe E Si Nweta Foto: TheFactFile
Ndị nne na nna Adama Traore hapụrụ obodo ha nke Mali ka ha biri na Barcelona, ​​obodo ha kwenyere na ọ ga-enye ụmụ ha ohere ka mma. Ọ bụ mkpebi nke akwụ ụgwọ.
Na-etolite, Adama Traore adịghị ka ụfọdụ kpakpando football (dịka Gerard Pique, Mario Gotze na Hugo Lloris) onye biri ndu bara uba tupu ya abanye na mbu. O si na ezinulo nke ulo ezughi oke, nke nne na nna ya enwebeghị ike inye ya ihe nchịkọta ụmụaka ihe egwu egwu ọhụụ dị ka nwata, ọ bụ naanị bọọlụ.
Adama tolitere na nwanne ya nwoke nke okenye bụ mog na nwanne nwanyị mara mma, Asa n'ime ezinụlọ nwere mmasị na bọl. N'ịbụ onye a zụlitere n'obodo Spanish nke Spanish, ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị na ya na ezinụlọ ya niile nwere ịhụ n'anya na egwuregwu mara mma nke football sitere na FC Barcelona.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Nkụzi na ịrụ ọrụ
Forhụnanya maka egwuregwu ahụ karịrị egwuregwu ndị ọzọ ka Adama na nwanne ya nwoke Moh malitere itolite bọọlụ n'ubi agbata obi CE L'Hospitalet. N'oge na-adịghị anya, ha abụọ malitere inweta mmụta egwuregwu bọl na Center D'Esports L'Hospitalet, ụlọ ebe ha abụọ nwere ọganihu dị egwu.
Adama Traore zụrụ azụ agụmakwụkwọ mbụ ya na CE L'Hospitalet Football Club. Ebe E Si Nweta Foto: BBDFutbool,& Joe.
Tupu mgbe ahụ, ụmụnne abụọ ahụ maara na ha nwere nkà na ha nwere ike ịme nnukwu ihe na football. Maka nne na nna ha na ndị ezinụlọ, enweghi obi abụọ ọ bụla na Moo na Adama na-aga n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ Adama Traore nwere ọganihu ngwa ngwa karịa nwanne ya n'ihi na ọ nwere nkà karịa.
N'afọ 2004, nrọ ezinụlọ Traore kwụsịrị ụgwọ. Maslọ akwụkwọ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama egwuregwu bọọlụ La Masia gbara ama na Adama maka ule. Nwanne ya nwoke akpọrọ Moh site n’aka ndị agbata obi Espanyol mgbe afọ abụọ gachara.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Ndụ Ndụ Mmalite
Mgbe obere oge soro onye agbata obi OA CE L'Hospitalet, ule na-aga nke ọma hụrụ Adama Traoré na-esonye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ama ama ama ama ama ama ama egwuregwu La Masia na 2004 na XNUMX.
Oge ndụ Adama Traore na La Masia - FC Barcelona Academy. Ebe E Si Nweta Foto: Joe
Laa azụ na ugbu a, ọ bụ nrọ nwata ọ bụla isonyere La Masia, otu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Mgbe ị sonyere ya bụ ihe egwuregwu fun obere Adama. Iji mezuo asọmpi siri ike, ọ chụrụ ọtụtụ àjà dị ka ụbọchị ọmụmụ na-efu efu na ihe ọ na-ele anya n'ụlọ. Àjà ndị a niile chọrọ ka ya na ọgbakọ ahụ nwee ike ịghọta ihe mbụ.
Ị maara?… Afọ (2004) nke Adama sonyere na La Masia kwekọrọ na afọ Lionel Messi gbawara n'ime ebe egwuregwu bọọlụ dị elu. N'oge ahụ, Adama na ụmụaka ndị ọzọ niile gbasoro nzọụkwụ nke dike nwata nwoke AKA La Pulga (GOAT).
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Akpanwu akwukwo akuko
Soro n'okporo ụzọ soro La Masia, Adama nọgidere na-enwe ọganihu ka ọ na-agafe usoro agụmakwụkwọ. N'agbanyeghị na ọ dị mkpụmkpụ, ike ya, ike ya na ọkụ ọkụ ya mere ka ọ bụrụ onye ama ama na ntorobịa. Ị maara? Adama Traore nwetara aha 'Usain Bolt'n'ihi ọsọ gbawasị ya n'oge ọ dị obere na Barcelona La Masia agụmakwụkwọ.
Adama Traore na-egwuri egwu na ndị na-emegide ya n'ụzọ okenye ma ya ukwuu. Ebe e si nweta ya FC-Barcelona
Ebe ọ bụ na ọ dị mma, Adama na-alụkarị ọgụ megide ndị otu ọgbọ dị elu na-eme nke ọma megide ndị egwuregwu karịa ya. Ejiri ya mee ihe dị ka azụ aka nri na onye na-awakpo ya n'oge ọ nọ na La Masia.
Ọ bụ ezie na atara ụmụaka ndị ọzọ na ụlọ akwụkwọ La Masia nke asọmpi kachasị n'ihi enweghị arụmọrụ, Adama Traore abụghị onye dị mma n'ịme ka mmasị ya bụrụ ọrụ ya. N'okpuru ebe a, mpempe ihe nkiri vidiyo na-egosi ngosipụta dị ịtụnanya nke prodigy nke egwuregwu n'oge ya na La Masia. Ekele pụrụ iche nye AirFutbol.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Na-ewu ewu Akụkọ
N'afọ 2013, Adama Traore ghọrọ Barcelona mgbe niile na Barcelona B, na-emechi ihe karịrị otu egwuregwu 40 maka akụkụ ahụ. Ọ nyere aka n'enyemaka nke ndị otu B B Barcelona iji merie 2014 UEFA Youth League.
Adama Traore na ndị otu egwuregwu na-eme ememme UEFA Youth League. Ebe E Si Nweta Foto: Nkwuba
N'afọ ahụ, Adama mere nke mbụ ọkachamara na ndị isi okenye nke FC Barcelona ka ọ nọchiri Neymar na mmeri La Liga. N'ihi ọrụ dị egwu ọ rụrụ na FC Barcelona otu B na ndị otu okenye malitere, klọb niile na Europe na-agbaso mbinye aka ya.
Na 14 August 2015, Adama Traoré sonyeere Premier League Aston Villa na otu afọ gasịrị, Middlesbrough ebe ọ gara n'ihu na-eji ya ijeụkwụ ime ọtụtụ nsogbu maka ndị na-agbachitere ndị mmegide. Ihe ịga nke ọma egwuregwu Adama Traore na Boro bịara mgbe ama ama ugboro atọ nturu ugo nke bu; “(1) na Middlesbrough's Player 'Player nke Afọ, (2) Onye na-eto eto nke Afọ maka Middlesbrough na (3) Ndị egwuregwu bọọlụ nke Middlesbrough.
Adama Traore soro otu Middlesbrough ya nweta onyinye. Ebe e si nweta ya Middlesbrough Official Website
Ọganiihu Adama Traoré na Middlesbrough dọtara ndị Wolverhampton Wanderers na-adaghị nkọ ịzụta ya. Onye nkuzi ya, Nuno Espírito Santo mezuru oke ọrụ ya na iji ozi ọsọ ya na ike ya site na mwakpo iji taa ndị ụkwụ mmegide ọgụ.
Adama Traore- ejiri dika njedebe nke ngwa agha iji taa ndị mmekpa ahụ mba
Na ndetu a na-agaghị echefu echefu, ọsọ nke ike Adama Traore ka etinyere na 6 nke October 2019. Ọ bụ ụbọchị ahụ ka Adama nọchibidoro ya Pep GuardiolaOtu egwuregwu siri ike nke Man City dịka o meriri ihe mgbaru ọsọ abụọ na mmeri pụọ (0-2), njirimara nke bụ n'ezie otu n'ime ihe ngosi kachasị na ọrụ aka ya.
Adbọchị Adama Traore tara Man City ahụhụ. Ebe e si nweta ya 90Min
Ugbu a n’enweghị mgbagha, Adama emeela ka ndị egwuregwu bọọlụ kwenye na ọsọ na ike bụ otu n’ime ihe ndị achọrọ dị ka onye egwuregwu ọgbara ọhụrụ. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na onye a ma ama karịsịa na FIFA, ọtụtụ ndị egwuregwu atụgharịwo uche ịmata ma Adama Traore nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye. Obi abụọ adịghị ya, ọdịdị ahụ ya na ọdịdị ya dị mma ga - eme n'ezie ka ọ nọrọ na ndepụta ndepụta enyi nwoke maka ọtụtụ ndị inyom na - akwado ya.
Ọnye na-bụ Adama Traore Girl Girl? Ekele diri IG
Dịka n'oge edere, anyị achọpụtala na enweghị ụzọ ọ bụla nke Adama nwere enyi nwanyị ma ọ bụ itinye aka na mmekọrịta ọ bụla. Site n'ihe ọ pụtara, ọ na-ahọrọ ilekwasị anya na ọrụ ịgba bọl ya. Agbanyeghị, anyị hụrụ ọtụtụ ndị na-eto eto na-agba ụkwụ na-akpa àgwà n'ụzọ dị otú a iji wee daa n'ọnọdụ ndị ọrụ ha dị mkpa. Ọ nwere ike bụrụ na Adama nwere enyi nwanyị mana ọ masịrị ịhapụ ịme mmekọrịta ya na ọha ya ọbụlagodi ugbu a.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Ndụ nke Onye
Tomata ndụ Adama Traore na ọdụm ga - enyere gị aka ịmatakwu onye ọ bụ. Na-amalite, na nlele mbụ nke Adama, ị ga-ahụ mmalite mmalite nke ihe dị ike na ọgba aghara. Ọ nọ na olulu ahụ, ọ na-elebara mgbatị ahụ ya anya nke ọma, ọ bụ ya kpatara nnukwu akwara na ahụ ike.
Na N'ajụjụ ọnụ Eke, Adama kwuru na nke ahụ, na ọ bụghị onye na-ebuli ihe dị arọ. N’okwu ya; Etinyebeghị m otu ibu. Ama m na ndị mmadụ agaghị ekweta, ma ọ bụ eziokwu. ”. Ajụjụ bụ; Do gị onye na-agụ akụkọ a kwenyere n'ihe o kwuru ọbụlagodi ị na-elele foto a anya dị ka onye egwuregwu bọọlụ 17 dị afọ?…
Foto nke Adama Traore dị ka onye egwuregwu 17 dị afọ. Ebe E Si Nweta Foto: Trollfootball
Nke abuo na ndu nke onwe ya, Adama Traore bu onye nwere ihe inye uwa obula ihe ozo, nke a abughi ihe ozo.SpeedỌ na-ewetara ya egwuregwu bọọlụ. He nwere ike ọ gaghị anọ n'otu Messi na C Ronaldo, mana Adama Traore emepụtara ụwa nke ịdị ukwuu ya ka egosiri na Ndi oru FIFA18. Ihe akaebe vidiyo (n'okpuru).
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Ndụ Ezinụlọ
N'ime ngụkọta nke ndị si mba ọzọ kwagara na 55,000 kwagara na Spain (Akụkọ Efe), ezinụlọ Adama Traore so na mmadụ ole na ole na-eme nke ọma na-emere onwe ha aha. A na-ekwupụta ezi na ụlọ na-emebi ụzọ nke ha maka nnwere onwe ego site na iji bọl dị ka ụzọ.
Adama Traore Papa: Nna ya nke na - akpọ naanị aha ya “Hag”Bu ezigbo ndi Mali site na agbụrụ. Mgbe gị na nwa ya nwoke lechara foto dị n'okpuru ebe a, otu ihe na-abata n'uche. Ọdịdị ahụ nke nna na nwa nwoke. (uru ahụ ndị ahụ na-ewuli elu!). You nwere ike ikwubi na Adama rụchara nna ya ahụ.
Adama Traore so nna ya. Ebe E Si Nweta: IG
Baba dị ka ọtụtụ ezigbo nna bụ aka n'ịkwado Adama mgbe ọ nọ na ụlọ ọrụ football nke Catalonia.
Nne Adama Traore: Fatoumata bu aha ya, a na-akpokwa ya 'nne na-akwado ya'. Dika nwa ya nwoke Adama kwuru; "Mama m na-akwado m mgbe niile, na-akwọ m ebe niile ma na-eburu m dị ka onye ntorobịa. Ọ nọghị m ebe ahụ, na-egosi m nkwado, ụbọchị m bịanyere aka n'akwụkwọ maka Wolves. "
Adama Traore ya na nne ya. Ebe E Si Nweta: IG
N'ịma ikpe site na foto ha dị n'elu, ị nwere ike ịgwa ha na nnabata ịhụnanya na-atọ ụtọ n'etiti Adama na Fatoumata, bụ nke karịrị obi niile.
Nwanne Adama Traore: N’okpuru bụ nwa nwanyị nwanyị mara mma nke Adama nke na - akpọ Esa. Ọ na-ede akwụkwọ n'oge ahụ, ọ bi na Spen ma na-eleta nnukwu nwanne ya England.
Adama Traore na nwanne ya nwanyị Esa sooro. Ebe E Si Nweta: IG
Nwanne Adama Traore: Mohamed Traoré Diarra onye amara aha ya buMụrụNwanne bu okenye Adama. Moha (amụrụ 29th November 1994) onye dị afọ abụọ karịa Adama abụrụla onye na-agba bọọlụ ọkachamara.
Zute nwanne Adama Traore- Moo. Ebe E Si Nweta Foto: Nkistra. Ekele diri IG
Dịka ụzọ isi kwenye ntụkwasị obi na mkpọrọgwụ nke ezinụlọ ya, Moha na 17th nke February 2014 ịgbanwee site na igwu egwu maka Spain ka ọ kpọọ maka Mali. N'oge a na-ede akwụkwọ, ọ na-egwuri egwu ugbu a dị ka onye na-aga n'ihu maka klọb Spanish Hércules na Segunda División B nke bụ ọkwa nke atọ nke sistemụ asọmpi egwuregwu Spanish.
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, si ebi ndụ
Maka onye na-agba oso n’uzu 2.6 Nde Euro (2.2 Nde Pound) kwa afọ n'oge a na-ede ihe, enwere ego ga-ezunụ maka ndụ nkịtị. Ihe ịga nke ọma Adama Traore nwere njikọ chiri anya na ọrụ ọ na-eme dị ka onye egwuregwu.
Inwe otutu ego adịghị agabiga ibi ndụ dị egwu, nke na-adị mfe ndị egwuregwu na-egosipụta nnukwu ụlọ na ụgbọala ndị nwere flashy. Adama maara ihe banyere etu esi eji ego ya eme ihe. Ọ na-anya ụgbọ ala nkezi ma na-ebi ndụ ndụ nke onye na-agba ụkwụ.
Adama Traore Eziokwu Ndụ. Ebe E Si Nweta Foto: CNBC, IG na Arab Business. Ebe E Si Nweta na Twitter
Adama Traore Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị A Na-ahụghị Ndụ, Eziokwu efu
Oge kacha ala na ọrụ aka ya: Edere Jenụwarị 2016 dị ka otu n'ime oge kachasị njọ nke ọrụ ya. Ị maara?… Apụrụ Adama Traore sitere na ndị isi otu Aston Villa n'ihi oge ugboro ugboro nke enweghị nchegharị. Mkpebi a nwere mmetụta dị njọ na ndị otu ya ka esi agbapụ akụkụ nke elu ugwu Bekee na njedebe nke oge ahụ.
O nwere ezigbo CV: Ọtụtụ ama ama ama ama bịara n’iru Adama Traore mgbe ha na-egwu FIFA ma n’ezie, Wolves. Eziokwu bụ, onye na-agba ọsọ ọsọ ma dịkwa ike abịawo ogologo oge dịka a hụrụla site na CV ya nke na-ekwu oke ọrụ ya.
Adama Traore Untold Number of Career Honors.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Adama Traore Childhood yana Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.